डीपीएल अक्सनः कुन क्लबमा को खेलाडी ? हेर्नुस् - Everest Dainik - News from Nepal
डीपीएल अक्सनः कुन क्लबमा को खेलाडी ? हेर्नुस्
काठमाडौ, पुस २१ । तेस्रो संस्करणको धनगढी प्रिमियर लिग (डिपिएल) क्रिकेट प्रतियोगिताको खेलाडी खरिद बिक्री (अक्सन) आज सम्पन्न भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस डीपीएलमा पारस खड्काको महेन्द्रनगर युनाइटेड पराजित
कुन क्लबले कुन खेलाडी किने ?
याे पनि पढ्नुस धनगढी प्रिमियर लिगको मिति सर्‍यो
याे पनि पढ्नुस ३० हजारदेखि २ लाख ५० हजारसम्म, डिपिएलका लागि २०५ खेलाडीले नाम दर्ता गराए